सरकारी जागिरे सुब्बाको बुवालाई खुलापत्र
असार १४, २०७९ ०९:४१:०७
श्रावण १८, २०७६ गुड मर्निङ मिडिया
साउन १८ शनिबार २०७६
यो चिठी हजुरलाई खुसुक्क लेखे पनि हुन्थ्यो अथवा पत्र नलेखेरै भेटमा सबै बेलिविस्तार लगाए पनि हुन्थ्यो। तर यो पत्र र यसमा प्रयुक्त विषय वस्तु केबल हजुर र मेरोबीचको मात्र कथा होइन, इमानलाई सिरोपर गरेर लगनशील जागिरे जीवन बिताएका अरु हजारौं कर्मचारीको पनि हो।
यो चिठी लेखिरहँदा हजुरका सपना र अपेक्षाहरू आँखा अगाडि झल्झली घुमिरहेका छन् तर मेरै आँखा धुमिल भइरहेका छन्। यी धुमिल आँखाको सहाराले जीवनयात्रा कति परसम्म र्पुयाउन सकुँला, सोचमग्न छु।
दोधारको यही दोसाँधमा छु। एउटा दलदलमा परेपछि बाहिर निस्किन गर्नुपर्ने संघर्षसरी भएको छ, जागिरे जिन्दगी। यो दलदलबाट बाहिर निस्कन हजुरको हात चाहन्छु। अरुले निर्दे्शित गरेको रेखामा हिँडेको जीन्दगी, अब आफैं हिँड्दै बाटो तय गर्न चाहन्छु। र, म जीन्दगीको दोस्रो अध्याय सुरू गर्न चाहन्छु।
विदितै छ हजुरलाई, जागिर सुरू भएको अर्को वर्ष बिहे भइहाल्यो, सरकारी तलबले काठमाडौंमा हामी दुई पालिन गाह्रो भयो। महिनै पिच्छे साथीभाइसँग मागिएको ५, ७ हजारको सापटी बढेर ५० औं हजारमा पुगेपछि बिहेमा मैले उनलाई लगाइदिएको र उनले मलाई लागाइदिएको गरगहना धरौटीमा राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ऋण निकालेर तिर्नु पर्यो। पछि बुहारी गर्भवती भइन्, बाबु जन्मियो। सामान्य छाक टार्नै गाह्रो हुने मलाई, उनलाई पोषक खानेकुरा खुवाउने कुरा त कल्पना भन्दा परको रह्यो। समयले हाम्रो जीन्दगी च्याप्दै लगेपछि आय आर्जनको वैकल्पिक उपाय नगरी भएन। आफन्त साथीभाइसँग सरसापटी गरेर भए पनि एउटा सानो पसल सुरू गरियो। नौ महिनाको बच्चा काखमा च्यापेर, घाम पानी केही नभनी बुहारी दैनिक करिब दुई किलोमिटर पैदल आउजाउ गर्नुपर्ने त्यो बाध्यताको सम्झनाले मन अहिले पनि पोल्छ। एकातिर उनको त्यस्तो बाध्यता र अर्को्तिर त्यो नौ महिने बच्चाको बेहाल। न खानाको टुंगो, न सुत्नको, सडक किनारको पसल, धुलो र धूँवा उस्तै।
आखिर बाध्यतासामू मन मार्नुको विकल्प के रह्यो र ? प्रश्न त्यही बेला झन् पेचिलो बन्यो, आखिर म जागिर किन खाइरहेको छु ? कि जागिरले मलाई खाइरहेको छ ? फेरि यही जागिर खान मानिसहरू किन मरिहत्ते गर्दै छन् ? एउटा निष्कर्ष पनि मैले त्यही बेला निकालेको थिएँ स् सायद म जागिर खान जान्दिनँ।
जागिरबाट ३० –३२ हजार मैले र पसलबाट ५० –५५ हजार मासिक बुहारीले कमाउँछिन् । अझ भनौं, परिवारको आम्दानी ८०–८५ हजार । कमाई नराम्रो होइन । तर खर्च ? फ्ल्याट भाडा (बत्ती, पानी,इन्टरनेट, आदि सहित) करीब १८ हजार । पसलको शटर भाडा २० हजार । घर खर्च करीब १० हजार । छोरोको स्कुल फी १०५०० र त्यसमा अन्य खर्च समेत जोड्दा १५ हजार । पसल कुर्न एकजना कर्मचारी राखेको छु, मासिक रु. १० हजारमा । हामी आफैलाई पनि केही व्यक्तिगत खर्च करीब ५ हजार । बुवा, ऋणको व्याज समेत जोड्ने हो भने त्यही कमाईले खर्च धान्दैन । सरकारी कर्मचारी कसरी धानिरहेका छन् ? आफ्नै हिसाबसँग आफैं विरक्तिन्छु ।
मलाई त्यतिबेलै अचम्म लाग्थ्यो कि, मानिसहरू सरकारी जागिर खान किन मरिहत्ते गर्छन्? आम्दानीको हिसाब हेर्यो भने त्यसले आफ्नै परिवार पाल्न पुग्दैन, थप सपनाहरूको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? अहिले बुझ्दैछु। त्यो त फगत एक पटकको राजनीतिक नारा जस्तै रहेछ स् ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने। धेरै के बोलौं, हजुरले बुझिहाल्नु भयो।
जागिरे त परिपक्व भएँ तर आफ्नै जीन्दगीको सार्थकता ? डर यता पो लाग्छ बुवा । यही डरले प्रत्येक दिन जब मेरो पैताला कार्यालय तिर लम्किन्छन्, लाग्छ कि दिवा जेलमा समय कटाउन जाँदै छु। लाग्छ कि, केही रकम तिरेर मलाई जेलमा राख्नका लागि खरिद गरेका छन्। यही जागिर कुरेर बसें भने म एउटा निरीह, खस्रो र मह सकिएको चाका जस्तो, बेकामे भएर निस्किनेछु। जतिबेला निस्किनेछु, सबै सकिएर निस्किनेछु। यो कल्पनाले मलाई अचेल धेरै नै सताउन थालेको छ। धेरै गर्ने रहर बाँकी छन्, तिनलाई पूरा गर्ने समय घर्किंदो छ। दस वर्षे जागिरे अवधिले भुत्ते बनाउँदै लगेको मेरो क्षमतापूर्नजागृत गर्न पनि वैकल्पिक जीवन यात्रा सुरू गर्नुको विकल्प छैन । यसमा हजुरको सहमति खोजेको छु। हजुरको सपनाहरुको विसर्जन भएको नठानिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।
उफ् ! हजुरले सिकाउनुभएको इमानदारिताको मानकभित्र यो प्रवृत्ति जाँचेर हेर्दा, म कहालिन्छु। भगवान कस्ता हुन्छन्, अहिलेसम्म देखेको छैन। तर ‘भगवान’को अवतार सोचिएका कतिपय मान्छेका सफेद चेहराभित्रका काला कर्तुतहरू देखेररसुनेर आफ्नै जिब्रो टोक्नुको विकल्प छैन अहिले। कर्तुतका फेहरिस्त पस्किए भने ती ‘भगवान’हरू फेरि उठ्न सक्दैनन्।
शनिवार, श्रावण १८, २०७६, ०७:०८:००
म कसैको प्रेमिका जस्तै देखिएछु